Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jönköpings län / Habo
Degmada Habo dadkeeda waa is daneeyaan. Halkaan waxaa lagu dareemi karaan amaan iyo wadajir, waxaana isla markaas qeeyb laga heli karaa wax kasto oo ka jiro Jönköping, oo jirto labado mayl dhinaca koonfurta.
Jönköping 20 kiilomitir
Skövde 75 kiilomitir
Borås 95 kiilomitir
Xalaado gaar ah ayaa si xoog leh fa'iido noo ah: degmo yar oo weeynaaneeyso oona uu dhaw Jönköping, jawi-shirkadeed geeso badan leh, meel qurxon uga taalo Vätterbygden dhanka koonfurta, bey'ad caruurta uu fiican. Waaliidin caruur leh oo badan ayaa doortay in ee degaan degmadeena sababto maalgelin weeyn ayaa galina xanaanada caruurta, iskuulada iyo jid dadka iyo baskiilada maraan oo aamin ah. Doorashada xurka ah ee dhinaca degaankana waxeey qorshaheena ka tahay hadaf muhiim ah.
Degmada Habo waxay leedahay bartamo magaalo oo fir-fircoon. Waxaa intaas sii dheer in aanay daqiiqado badan qaadan in lagu gaaro Jönköping haddii qofku doonayo inuu dareemo xarakaadka magaalo weyn. Bartamaha Habo waxaa ku yaala laba dukaan oo raashin, iyo dukaamo yaryar oo badan, maktabad, xafiiska shaqada iyo xafiiska arrimaha bulshada oo leh qaybta qaabilaada qaxootiga. Waxaa ku yaala laba dukaan oo iibiya alaabta la soo isticmaalay hal dukaan oo alaabta la soo isticmaalay oo ku yaala Habo, Erikshjälpen, kaas oo furan laba maalmood toddobaadkiiba.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Habo